Zvishandiso zvakaderera zvekushandisa: maitiro uye kupatsanura | Green Renewables
Isu tinoziva kuti kushandiswa kwemagetsi muSpain kuri kuwedzera kudhura. Nokudaro, zvakakosha zvikuru kuderedza mari yemagetsi sezvinobvira. Kune izvi zviripo midziyo yekushandisa simba. Iwo anowanzo midziyo ine tekinoroji yakaomesesa kuita yakaderera mashandisiro esimba uye optimize basa rayo. Izvo zvakakosha zvikuru kana tichida kuchengetedza zvose pamagetsi emagetsi uye kuderedza kusvibiswa kune zvakatipoteredza.
Nechikonzero ichi, isu tichakumikidza chinyorwa ichi kukuudza zvese zvaunoda kuziva nezve kushomeka kwemidziyo yekushandisa, mashandisiro avanoita uye kuti chii chakanakira.
1 midziyo yekushandisa simba
2 Zvinyorwa zvemagetsi
3 Kukosha kwekuchengetedza simba
4 Zvakanakira zvekushandisa zvakaderera midziyo
Zvishandiso zvekushandisa zvakaderera ndezviya zvinoshandisa simba shoma rinokwanisika kune mamwe mabasa. Imwe nzira iyo dzimwe nguva inoshandiswa kureva kwavari ndeye midziyo yemhando yepamusoro, sezvo simba remagetsi hachisi chinhu chinopfuura kushanda kwepamusoro uye kuderera kwesimba rekushandisa.
Iregi iyo inofanirwa kuverengerwa mumidziyo yese yemagetsi, ichitsanangura huwandu hwesimba uye zviwanikwa izvo mudziyo unofanirwa kushanda kana kushandisa kuita basa rawo. Iri simba remagetsi rinotitendera kuti tizive kuti midziyo inodhura zvakadii uye nekudaro kana ichishandiswa zvishoma.
mavara emagetsi ndivo shamwari yedu yepamoyo kuona midziyo yekushandisa yakaderera. Ichi ndicho chiziviso chinoonekwa pahuwandu hwemidziyo yemumba, kana zvirinani pane izvo zvinoda simba rakawanda:
Simba label igwaro rine ruzivo rwakasiyana rine chekuita nemidziyo iri kutaurwa. Sezvatinoona mumufananidzo, kushanda kwesimba kwemidziyo yemumba kunoyerwa pazviyero zvakasiyana zvakaiswa mavara akasiyana. Midziyo inokurudzirwa zvakanyanya, yatinogona kudaidza kuti midziyo yekushandisa yakaderera, ndeiya ine green logo, zvinoenderana nezvikamu A+++, A++ kana A+.
Ipapo kune izvo midziyo isingadyi simba rakawanda, asi haigone kunzi yakaderera midziyo yekushandisa. Anowanzo midziyo yechinyakare kana kubva kune vasingazivikanwe vagadziri. Akanyorwa nemabhii A uye B.
Chekupedzisira, tinogona kutaura izvo zvekushandisa zvakanyanya. Panyaya iyi, iwo akaiswa muchikamu nemavara C uye D uye anoenderana neruvara rutsvuku rwesimba resimba. Mukuwedzera kune iyi catalog yemagetsi emagetsi, mavara emagetsi anopa rumwe rudzi rwekuwedzera ruzivo. Semuenzaniso, mifananidzo yataona inosanganisira ruzha rwunogadzirwa nemudziyo kana kuti simba rekuchengeta.
Kukosha kwekuchengetedza simba
Kutenga midziyo yekushandisa yakaderera ndiyo, hongu, danho rekutanga rekuchengetedza simba, saka huwandu hwemari yako yemagetsi haisi diki. Asi kuti uite izvozvo chaizvo, iwe unofanirwawo kuzvishandisa nemazvo uye kuterera kune ekutanga ekuchengetedza simba matipi. Aya ndiwo mamwe ekurudziro eIDAE panyaya iyi:
Usatenge midziyo mikuru kana ine simba kupfuura yatinoda.
Tarisa mirairo yemugadziri wekuchengetedza nekuchenesa mudziyo wako kurebesa hupenyu hwayo uye kuchengetedza simba rakawanda.
Iyo air conditioning inofanira kurongwa pa26ºC (kwete pasi) muzhizha.
Dzima zvachose zvishandiso zvine ruzivo rwehwindo kana yedhijitari yekutarisa (TV, maodhiyo emidziyo, nezvimwewo) patinenge tisiri kuzvishandisa.
Isa marambi anochengetedza simba kana kuti machubhu efluorescent munzvimbo dzemba mako dzine marambi kweinopfuura awa imwe pazuva.
Usaremedze kana kuisa pasi midziyo yemagetsi. Mumwe nomumwe akagadzirira kushanda pasi peimwe mutoro, iyo inotsanangurwa pairi uye mumirayiridzo yemugadziri. Semuenzaniso, muchina wekuwachisa wakaremerwa haukwanise kuwacha mbatya nemazvo. Mukupesana, kana tikaitanga nomutoro wakaderera zvikuru, tingaguma tashandisa mvura yakawanda nesimba nemhaka yokuti nokukurumidza kana kuti gare gare tichatofanira kuitangazve.
Kana zvasvika pakutenga midziyo yekushandisa simba, inobhadhara kuziva kuti ndeipi iyo inoshandisa simba rakawanda. Pamwe chete, avhareji yemba muSpain inodya inenge 4.000 kWh (kilowatt maawa) pagore, iyo inenge 62% inoenderana nemidziyo yemumba.
Zvinoenderana nefungidziro neInstitute for the Diversification and Conservation of Energy (IDAE), zvimiro zvakaita seanotevera:
Firiji: Kutungamira boka neinenge 19% yehuwandu hwekushandisa.
Washing machine: 7,3%
Zvakanakira zvekushandisa zvakaderera midziyo
Aya ndiwo mabhenefiti akasiyana emidziyo yakaderera yekushandisa:
Kuchengetedza hupfumi: ivo vanodhura zvakanyanya (paavhareji vanogona kuva pakati pe100 ne200 euros, zvichienderana nechigadzirwa), asi nekufamba kwenguva vanowanzobhadhara mari yavanomiririra pabhiri.
Mukurumari: Iko kushandiswa kwakaderera kunowedzera kune yakakwirira kushanda kwayo, izvo zvinoreva hupenyu hwayo hurefu mumba. zvimwe amortization factor.
Mibairo yakanaka Zvingave kugeza kana kutonhora, zvakaratidzwa kuti mhedzisiro yacho inogutsa nerudzi urwu rwemidziyo.
Ecology: Zviripachena, kuderera kwesimba rekushandisa kwakanakira zvakatipoteredza.
Iwo magirobhu matsva anoshanda zvakanaka ndiwo midziyo yemagetsi inopedza zvishoma mumba. Akati kushandiswa kuri pakati pe4W ne5W paawa. Kana tiine girobhu rekare re incandescent, rinogona kusvika 25W paawa. Ndiko kuti, 400-500% zvimwe. Incandescent uye halogen bulbs hazvichatengeswa muEU. Pamusoro pezvo, zvakakosha kutsiva magirobhu emwenje ekushandisa mashoma atakasiya kuti tichengetedze. Hongu, nepo magirobhu ari iwo midziyo isingadyi magetsi mumba, isu hatina imwe chete.
Pamusoro peizvozvo, kunyangwe ikadya zvishoma, pane mukana wekuti isu tichashandisa mwenje kwenguva yakareba kupfuura mamwe maturusi. Dzimwe nzvimbo, dzimwe nguva dzegore, sechando, dzingada mwenje mirefu. Saka hatingofanire kufunga nezvekushandisa pachedu. Tinofanira kuona chiedza chakazara chemba, nguva yatinoda, uye kujaira kudzima mwenje patinobuda mumba.
Sezvauri kuona, midziyo yekushandisa yakaderera yakakosha kana tichida kuderedza kushandiswa kwesimba mumba. Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve yakaderera midziyo yekushandisa, maitiro avo uye kukosha kwaainako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » midziyo yekushandisa simba
nzvimbo dzinotonhora zvikuru munyika